महिलामा यी ८ मध्ये कुनै एक लक्षण देखिए ? हुनसक्छ क्यान्सरको संकेत (भिडियो):: Naya Nepal
महिलामा यी ८ मध्ये कुनै एक लक्षण देखिए ? हुनसक्छ क्यान्सरको संकेत (भिडियो)
यदि तपाईले स्तनमा गोलीगाँठा भेटाउनुभयो भने के गर्नु हुन्छ ? क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ या सक्दैन एकचोटी पक्कै सोच्नुपर्छ।
त्यसैगरी यदि घाँटी सुन्निएको छ, छालामा निको नहुने डल्लो, कुनै अंगको निको नहुने दुखाइ आदि समस्या आइरहेको छ भने सजगता अपनाउनुपर्छ। यो टिप्समा नाक,कान तथा घाँटी,स्तन, रगत, फोक्सो, छाला तथा विभिन्न प्रकारका क्यान्सरका लक्षणहरु देखाउन खोजिएको छ।
यदि तपाईको दिसामा रगत देखियो (पाइल्स रोगबाहेक) भने त्यो ठूलो आन्द्राको क्यान्सर हुन सक्छ। एनिमियाले तपाईलाई थकान महसुस गराउने, चक्कर लगाउने जस्ता लक्षण गराउन सक्छ जुन क्यान्सरका लक्षण हुन सक्छन्।